I-Calculus: Inkcazo kunye nemizekelo
Isebe leemathematika zokutshintshwa kweerhafu
I-Calculus yincwadi yokutshintshwa kweerhafu. Iinqununu emva kokubala emva kwangekhulu leminyaka ukuya kumaGrike asendulo, kwakunye neChina yaseNdiya, e-Indiya nakwiYurophu ephakathi. Ngaphambi kokuba i-calculus iqulunqwe, zonke izibalo zazinqabile: Zingakunceda kuphela ukubala izinto ezaziselungile. Kodwa, iphela indalo ihamba rhoqo kwaye ishintsha. Akukho zinto-ezivela kwiinkwenkwezi ezikwindawo ukuya kwiintlobo ze-subatomic okanye iiseli zomzimba-zihlala ziphumla.
Enyanisweni, malunga nayo yonke into ehlala kuyo yonke indawo ihamba. I-Calculus yancedisa ekufumaneni ukuba iinqununu, iinkwenkwezi, kunye nomba, zihamba kwaye zitshintsha ngexesha langempela.
I-Calculus yaveliswa kwinqanaba elingaphambili le-17 leminyaka ngabafundi beemathematika ezimbini, uGottfried Leibniz no- Isaac Newton . INewton yaqala ukuhlaziya i-calculus kwaye isisebenzisa ngokuthe ngqo ekuqondeni kweenkqubo zenyama. Ngokuzimeleyo, uLeibniz uphuhliso lweenkcazo ezisetyenzisiweyo kwiibalo. Kulula nje, ngelixa izibalo eziphambili zisebenzisa imisebenzi efana ne-plus, minus, amaxesha, nokwahlukana (+, -, x, no-÷), i-calculus isebenzisa imisebenzi eyenza imisebenzi kwaye idibanise ukubala iintlawulo zenguqu.
Ibali leMathematika lichaza ukubaluleka kwe-Newton ye-theorem ebalulekileyo ye-calculus:
"Ngokungafani nejometri ye-geometri yamaGrike, i-calculus ivumele izibalo kunye neenjineli ukuba zenze ingqiqo ngesindululo kunye noshintsho oluguquguqukayo kwihlabathi elitshintshileyo, njengemijikelezo yamaplanethi, ukunyuswa kwamanzi, njl njl.
Ukusebenzisa i-calculus, izazinzulu, izazi zeenkwenkwezi, ii-physicists, izibalo, kunye neekhemisti ngoku sele zitshatile ukujikeleza kweeplanethi kunye neenkwenkwezi, kunye nomzila wee-electron kunye neeponononi kwinqanaba le-athomu. AbaChwepheshe kuze kube namhlanje basebenzise i-calculus ukugqiba ixabiso lentambo ye-demand .
Iintlobo ezimbini zeCalus
Kukho amasebe amabini aphezulu okubala: i- differential and calculus .
Ukubala okuhlukileyo kunquma izinga lokuguqulwa kwesininzi, ngelixa i-calculus ebanzi ifumana ubuninzi apho izinga lokutshintshwa lwaziwa. Ukubala okuhlukeneyo kuhlola iirhafu zokutshintsha kwemithambeka kunye neerveve, ngelixa i-calculus ebanzi inquma iindawo zaloo ndlela.
I-Calculus inezicelo ezininzi ezinobomi bobomi, njengoko i-website, i-teachingnology ichaza:
Phakathi kweengcamango zomzimba ezisetyenziselwa izibalo zokubala ziquka ukunyakaza, umbane, ukushisa, ukukhanya, ii-harmonics, i-acoustics, i-astronomy, kunye ne-dynamics. Enyanisweni, iingcinga eziphambili ze-physics ziquka i-electromagnetism kunye ne-Einstein ye-theory yokusebenzisa ukulinganisela.
I-Calculus isetyenziselwa ukubala iirhafu zokubola kwe-radioactive ekhemistry, kwaye kwanokuba uqikelele amaxabiso okuzalwa nokufa, amanqaku ewebhusayithi yesayensi. Abachumi basebenzisa i-calculus ukuqikelela ukubonelela, ukufunwa, kunye neenzuzo eziphezulu. Ukubonelela kunye nokufunwa, emva koko konke, kubhalwe ngokukodwa kwirebe-kunye nejika eliguqukayo.
I-Economists ibhekisela kule ngqungqutyana eguqukayo efana "ne-elastic," kunye nezenzo zengqungquthela "njenge-elasticity". Ukubala umlinganiselo ochanekileyo wokuxinwa kwinqanaba elithile kwi-supply or curve curve, kufuneka ucinge ngeenguqu ezincinane kwiinguqu kwaye, ngenxa yoko, zibandakanya iziphumo zemathematika kwiifomula zakho ze-elasticity.
I-Calculus ikuvumela ukuba ufumane amanqaku athile kweso sixa-shintsho sokunikezela-kunye nesicelo.
Konke Nge-Virus Ebola
I-Cenozoic Era (65 Million Years Ago ukuya kwangoku)
Indlela yokuhlala uLucky eJamani
Itheyibhile yoTyunjwa kwiLizwi lesiTaliyane "iNdawo" (ukushiya okanye ukuhamba)
Ukudweba Iingongoma: 31 Iingcamango
Iingcebiso ezi-5 zokukunceda Ufunde i-Play Script
IsiGwebo esiPhezulu (IsiGrama kunye neProse Style)